Rugby à VII – «Afrique 2019»: handeha hiofana any Japon ny Makis vehivavy | NewsMada
Rugby à VII – «Afrique 2019»: handeha hiofana any Japon ny Makis vehivavy
Manana fihaonana iraisam-pirenena goavana hatrehina ny Makis de Madagascar, lahy sy vavy, amin’ity taona 2019 ity, eo amin’ny rugby lalaovina olona fito. Hiady ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika 2020”, hatao any Tokyo, Japon, mantsy izy ireo, amin’izany.
Ho fanomanana ireo lalao iraisam-pirenena hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika sy ny “Lalao olympika 2020” ary ny “Lalaon’ny Nosy”, fantatra fa handeha hiatrika fiofanana any Japon ny Makis vehivavy, ny 16 hatramin’ny 27 jona ho avy izao. Raha tsiahivina, anisan’ireo fihaonana lehibe hatrehin’ny Makis vehivavy ny “Africa women’s sevens”. Lalao hatao any Tonizia, ao amin’ny kianja monisipalin’i Jemmel, ny 12 sy ny 13 oktobra ho avy izao.
Hiady lohany amin’izany ny firenena miisa 12: i Tonizia, mpampiantrano, i Kenya, i Oganda, i Zimbaboe, i Madagasikara, i Sénégal, i Botsoana, i Zambia, i Maraoka, ny Nosy Maorisy, i Afrika Atsimo ary i Ghana. Tsy mbola fantatra kosa ny “formule”-n’ny fifaninanana fa ho tafita avy hatrany any Japon ny voalohany. Mbola hanao ny lalao fanarenana kosa ireo mitana ny laharana faharoa sy fahatelo.
Hiady tapakilan’ny “JO” koa ny lehilahy
Ao Bosman Stadium, ao Johannesbourg Afrika Atsimo, kosa ny atao ny “Africa men’s sevens”, ho an’ny lehilahy, ny 8 sy ny 9 novambra ho avy izao. Hiady ho tompondaka, amin’io, ny firenena 14: i Zimbaboe, i Kenya, i Ogandà, i Madagasikara, i Zambia, i Tonizia, i Sénégal, i Maraoka, i Namibia, i Ghana, i Botsoana, ny Nosy Maorisy, i Côte d’Ivoire ary i Nizeria.
Toy ny an’ny vehivavy, tafita avy hatrany hiatrika ny “Lalao Olympika” any Japon ny voalohany ary mbola hanao lalao fanarenana ihany koa ireo firenena mandrombaka ny medaly volafotsy sy alimo.
Marihina fa tsy mandray anjara amin’ity fifanintsanana ity i Afrika Atsimo, noho izy ireo mitana ny laharana fahefatra eran-tany. Fanamby goavana ho an’ny Malagasy rugby rahateo ny hahatafita ny ekipam-pirenena malagasy, any amin’ity “Lalao Olympika 2020”, hatao any Japon ity.